Itinye akwụkwọ na AI iji wuo profaịlụ zuru oke ma zụta ahụmịhe nke onwe | Martech Zone
Ndị ọchụnta ego na-achọkarị ụzọ iji melite arụmọrụ na arụmọrụ ha. Nke a ga - abụ ihe dị mkpa dị mkpa ka anyị na - aga n'ihu na - agagharị ọnọdụ azụmahịa COVID siri ike na nke na - agbanwe agbanwe.
N'ụzọ dị mma, ecommerce na-eme nke ọma. N'adịghị ka ụlọ ahịa anụ ahụ, bụ nke mgbochi ọrịa na-efe efe emetụtala nke ukwuu, ahịa dị n'ịntanetị dị elu.
N'ime oge ememme 2020, nke bụ oge ịzụ ahịa na-ekwo ekwo nke ukwuu kwa afọ, ahịa UK na-arị elu site na 44.8% na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (47.8%) nke ire ere ahịa niile na-eme site n'ụzọ dịpụrụ adịpụ.
BRC-KPMG Retail Ahịa Monitor
Site na ngbanwe dijitalụ na-adịgide adịgide na mbara igwe, ma ọ bụ opekata mpe nke ga-ahụ azụmaahịa na-anabata usoro omnichannel iji rite uru na ụwa abụọ kachasị mma, ọtụtụ ndị ga-ele anya n'ụzọ iji kọwaa ihe nwere ike ịbụ omume amaghị maka azụmahịa dijitalụ ọhụụ nakwa iji belata ibu ọrụ buru ibu.
AI na-enyeworị ihe ngwọta maka isi ihe mgbu ndị a. Site na ohere nnakọta data yana nhọrọ akpaaka, enwere ikike iji belata ọrụ nchịkwa na ihe efu n'iyi, ịchekwa oge azụmaahịa na ego yana ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma n'ihi nsonaazụ.
Mana na 2021, enwere ikpe iji were otu ihe a. Ugbu a anyị matara uru nke AI ma nwee ike ijide n'aka na ọ nọ ebe a iji nọrọ, azụmaahịa ga-ahụ obere ihe egwu dị na ntinye aka.
Site na iji teknụzụ na data dịnụ iji wuo profaịlụ ịzụ ahịa ka mma, ụlọ ọrụ nwere ike iji ike AI na ikike ha nwere rụọ ọrụ ha.
Nghọta Ka Mma Banyere Ndị Ahịa Gị
A maara AI maka ikike ịnakọta data iji gosipụta na ịkọ amụma ndị ahịa na ahịa site na ịtụle omume ịzụ ahịa, yana mmetụta na gburugburu micro na macro.
Nsonaazụ bụ foto zuru oke nke ahịa gị nke nwere ike ịga n'ihu ịme mkpebi mkpebi azụmahịa. Mana ka ọ na-aga n’ihu, ogo na ojiji nke data ọ nwere ike ịnakọta ma nyochaa agagharịla na oke.
Taa, ma na-aga n'ihu, enwere ike iji data na nghọta mee ihe zuru oke na nghọta ziri ezi banyere ndị ahịa ọ bụla, karịa ngalaba ndị ahịa izugbe. Dịka ọmụmaatụ, site na nnakọta na nnabata data kuki mgbe onye ahịa bịara na ebe nrụọrụ weebụ gị, ị nwere ike ịmalite ịmalite profaịlụ ha, gụnyere mmasị ngwaahịa na mmasị nchọgharị.
Site na ozi a echekwara n'enweghị nsogbu na ndekọ gị, ị nwere ike ịtọ ọdịnaya mgbe ha gaghachitere ibe iji mepụta ahụmịhe na ihu ọma. Ma ọ bụrụ na ị kwenyere na iwu gị, ị nwere ike iji ozi a iji dozie mgbasa ozi ezubere iche na nkwukọrịta.
Ugbu a, e nwere echiche dịgasị iche iche banyere ụkpụrụ omume a. Agbanyeghị, site na ijichi iwu na usoro nnabata, njikwa nchịkọta data na-adịgide n'aka ndị ahịa. Maka ndị nabatara ya, ọ bụ ọrụ ndị na-ere ahịa, na maka ọdịmma ha ka ha jiri ya wee nwee uche.
A, a n'ji ga-achọ ha nchọgharị mmasị na-echeta. Ọ na-eme maka ahụmịhe ịzụ ahịa dịkwuo mfe ma na-azọpụta ha oge na ịtọgharị na nhọrọ nzacha. N'ezie:
90% nke ndị na-azụ ahịa dị njikere ịkekọrịta ozi omume onwe onye na ụdị maka ahụmịhe dị mfe. Yabụ, a ga-eleba anya na akara ngosi nwere ike ịme nke a karịa, na-agba ume nlọghachi ma na-azụghachi azụ.
Otú ọ dị, ihe ha na-achọghị bụ maka ụdị iji ihe ọmụma ha jidere eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi site na iji ihe nkwukọrịta na-enweghị ngwụcha na mgbasa ozi eweghachitere ha. N'ezie, ndị a nwere ike imebi aha nke ika ahụ karịa inye ya ihe ọma.
Mana data ị nakọtara nwere ike inyere gị aka ịkọ nke ahụ kwa. You nwere ike ikpughere ụdị mgbasa ozi nke onye ahịa ọ bụla na-aza nke ọma, yana ọbụnadị ịkọwa oge e mere ya, n'ụdị, na ụdị ngwaọrụ ma ọ bụ ọwa, ogologo oge, yana ma ọ mere n'ezie na-akwado pịa site ma ọ bụ ntughari
Ozi a bara ezigbo uru maka iwuli profaịlụ ịzụ. Site na ya, ị nwere ike ịmepụta mkpọsa na onyinye na-aga nke ọma ka ị na-enye ndị ahịa gị kpọmkwem ihe ha chọrọ.
Ma n'oge gara aga, profaịlụ nke ọ bụla na-ejikọta ya na ngalaba site na myirịta, ikike akpaaka nke usoro ihe eji arụ ọrụ nke AI pụtara na a ga-enye ndị ahịa ọ bụla ahụmịhe nke ha.
Ihe ịga nke ọma na nsonaazụ ahịa na-ekwu maka onwe ha. Ọdịnaya ahaziri iche anatalarị ọnụego njikọ aka karịa ka ndị ọzọ na-adịkarị:
Ozi ịntanetị nkeonwe nwere ike nweta ihe ruru 55% na ọnụego emeghe.
91% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụ ahịa na ụdị ndị na-enye onyinye na ndụmọdụ dị mkpa.
Nnukwu ihe nyocha
Ugbu a, chegodi otu ihe omume ndị a ga-esi gaa nke ọma ma ọ bụrụ na anyị eburu n'ihu na-aga n'ihu ma kọwaa mkpebi anyị site na ozi anyị nakọtara site na ọganihu AI, iji mepụta profaịlụ zuru ezu na ịzụta.
Onwe m, ekwenyere m na ọ bụ ohere a na-agaghị efu.
Tags: aiAmamịghe echicheịzụ onyeCOVID-19ecommerce mmadụNwokeoge ezumikeonline ịzụta personaspost-covidụlọ ahịauk online ahịa